राजेश हमालको ‘जातको प्रश्न’माथि प्रश्न
राजेश हमालको ‘जातको प्रश्न’माथि प्रश्न ‘जातको प्रश्न’मा सरोकारवाला समुदायले सोचेजस्तो प्रश्न उठ्न नसकेको गुनासो
एल.बी विश्वकर्मा सोमबार, भदौ २२, २०७७
काठमाडौं– गत साउन १७ गते शनिबार साँझ साढे ६ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा देखिए अभिनेता राजेश हमाल ।
उनले आफ्नो चलचित्र–यात्राको चर्चाबाट कुरा सुरु गरे । तीन सय हाराहारी चलचित्रमा अभिनय गर्दा अनेकन पात्र बनेको बताए । त्यस क्रममा उनीहरूको भोगाइ, बुझाइ र भावना पनि आत्मसात् गरेको उल्लेख गरे ।
यसै सन्दर्भमा उनले दलित शब्द उच्चारण नगरीकनै भने, ‘एउटा समुदायका व्यक्तिमाथि अर्को समुदायले किन त्यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पछि खोज्छु, खोजिरहेको छु ।’ र, उनी कुराको चुरोतिर लागे, ‘यस्ता प्रश्नको उत्तर हाम्रो प्राथमिकतामा किन परेन ? यो प्रयासको थालनी गरेको छु ।’ उनले इंगित गरेको प्रयास थियो कार्यक्रम ‘जातको प्रश्न’ ।
हमालले आफूले प्रयास थालेको बताए पनि कार्यक्रमको प्रयासचाहिँ दलित अधिकारका लागि काम गरिरहेको गैरसरकारी संस्था समता फाउन्डेसनले थालेको थियो । त्यसमा राजेश हमाललाई कार्यक्रम प्रस्तोताका रूपमा चुनिएको थियो ।
समताले कार्यक्रम ‘अनाउन्समेन्ट’ गरेलगत्तै सरोकारवाला समुदायमा खासखुस सुरु भइसकेको थियो, ‘जातको प्रश्नमा राजेश हमाल नै किन ?’
समता–अध्यक्ष प्रदीप परियारले भनेका थिए, ‘सबैले यसबारे सुनून् र बहस सुरुवात होस् भनेर ।’
‘हेरौं न त, कस्तो बन्छ कार्यक्रम !’ कतिपय सरोकारवालाको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया थियो, केहीलाई भने अझै चित्त बुझेको थिएन ।
भन्दै थिए, ‘कार्यक्रमले विषय मात्रै बिटुल्याउने भयो ।’
सवाल सामान्य टेलिभिजन शोको मात्रै थिएन, सयौं वर्षको दलन सहेको समुदायसँग सम्बन्धित प्रश्न थियो । त्यसैले चासो र चिन्ता स्वाभाविक थियो ।
त्यस्तै चलचित्र निर्माणका क्षेत्रका काम गरिरहेका रघु परियारलाई कार्यक्रम भारतीय अभिनेता आमिर खानले चलाउने ‘सत्यमेव जयते’जस्तो होला भन्ने लागेको थियो ।
कार्यक्रम हरेक शनिबार कान्तिपुर टेलिभिजनबाट आउन थाल्यो । त्यसको एक दिनपछि समता फाउन्डेसनको युट्युब च्यानलमा पनि अपलोड भइरहेको छ ।
‘उच र निजको प्रश्न । विभेद र बहिष्करणको प्रश्न । संस्कार र संरचनाको प्रश्न । सामाजिक व्यवहार र राजनीतिक चिन्तनको प्रश्न । मानवता र मानवअधिकारको प्रश्न’ भन्दै राजेश हमालले कार्यक्रम ‘जातको प्रश्न’ सुरु गर्छन् र कुनै एक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छन् । बीच–बीचमा सम्बन्धित विषयमा रिपोर्ट पनि देखाउँछन् ।
गैरदलित समुदायकी युवतीसँग प्रेम गरेकै कारण मारिएका काभ्रे, पाँचखालका अजित मिजारको मुद्दालाई उठाएर सुरु भएको कार्यक्रमको ६ वटा श्रृंखला प्रसारण भइसकेको छ ।
यसैबीच फेरि कार्यक्रम ‘जातको प्रश्न’ फितलो बनेको चर्चा भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल र सरोकारवालाबीचको भेटघाटमा चर्चाले स्थान पाइरहेको छ । त्यसैमध्येको एक हो पत्रकार नरेश ज्ञवालीको प्रश्न ।
उनले लामै स्टाटस लेखेर ‘जातको प्रश्न’को प्रस्तोतामा राजेश हमाल नै किन छनोट गरियो भन्ने कोणबाट प्रश्न गरेका छन् । ‘प्रदीप परियार र सरिता परियारसहितको टोलीलाई किन लाग्यो कि एउटा खाले श्रेणीवादको अन्त्यका लागि अर्कोखाले श्रेणीवादको शीर्षमा रहेका र आफूलाई ‘महानायक’ भनाउन रुचाउने उनै शीर्षस्थ राजेश हमाल नै उपयुक्त हुन्छन् भन्ने ?’
उनले त्यसको सम्भावित उत्तरको आँकलनलाई पनि इंगित गर्दै लेखेका छन्, ‘उनको कुरा धेरैले रुचि दिएर हेर्नेछन् भन्ने पूर्वानुमान गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन तर फेरि पनि एउटा प्रश्न जिउँदै छ, त्यो के भने तपाईंले गर्न खोजेको राम्रो थियो कि टिआरपीका लागि थियो ?’
उनले कार्यक्रमले केही सार्थक बहस गर्छ कि भन्ने प्रतीक्षा गरेर केही एपिसोड हेरिसकेपछि आफू निराश भएको संकेत गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘जातको प्रश्न हेर्दा लाग्छ– अक्षय कुमारले नरेन्द्र मोदीलाई प्रश्न सोधिरहेछन् कि तपाईं आँप खानुहुन्छ कि हुन्न ? खानुहुन्छ भने चुसेर खानुहुन्छ कि काटेर ? दुवै हिट ।’
उनले जात व्यवस्था समाजको यथावत् मान्यतामा टेकेर अनि बिस्तारै मीठो र कोमल स्पर्शद्वारा अन्त्य हुनेवाला छैन भन्ने निष्कर्षसहित लेखेको स्टाटसमा चित्त बुझेका इमोजी र प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।
‘टिचिङ हस्पिटलको प्राङ्गणबाट अजित मिजारको विषयमा सुरु गरिएको कार्यक्रम हेर्दा केही नयाँ हुन्छ, राजेश हमाल नै सडकमा आए भन्ने लाग्याथ्यो । तर नयाँ एपिसोड हेर्दै जाँदा राजेश हमालबाहेक अरू मुद्दा केही देखिन छाड्यो,’ उनले भने ।
नरेशको प्रश्नकाे जवाफमा फाउन्डेसनकी सरिता परियारले लेखेकी छिन्, ‘नेपाली समाजको जातव्यवस्था कल्पना गरेभन्दा अत्यासलाग्दो छ । महाव्याधिमा दलितहरूको श्रृंखलाबद्ध हत्याले यही पुष्टि गर्छ । जातको जाँतोबारे हुने गरेको बौद्धिक बहस सुन्दा तपाईं–हाम्रो नाकैमुनि पनि बडेमानको प्रश्नचिन्ह उठ्छ । जिउँदो दलितको शरीर जात व्यवस्थाविरुद्ध एक प्रतिरोध र प्रश्न हो । यिनै प्रश्नको भीडमा जातको प्रश्न प्रदीप परियारलगायत टिमको सानो प्रयास हो । जातको प्रश्न हेर्दा मलाई लागेको छ, जात र श्रेणीका आधारभूत प्रश्नबारे गहिरो विमर्श नगर्दा श्रेणी कायमै रहन सक्छ ।’
सरिताले नरेशले उठाएको प्रश्नको स्पष्ट जवाफ त दिएकी छैनन्, तर प्रश्नमा दम छ भन्नेमा उनको पनि सहमति देखिएको छ ।
प्रश्नमा कार्यक्रम ‘जातको प्रश्न’को सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठाउन खोजिएको देखिँदैन, त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाइएको छ ।
रुकुम–जाजरकोट हत्याकाण्डको ताजा पृष्ठभूमिको समय समातेर सुरु भएको यस्ता कार्यक्रम दलित समुदायमाथिको हिंसाविरुद्ध बलियो रूपमा प्रस्तुत हुने आशा स्वाभाविक हो । गोरखाका मेखराज उदयलाई पनि त्यही लागेको थियो । नेपाली जनता दलका महासचिवसमेत रहेका उनले कार्यक्रममा राजेश हमालले गर्जिएर दलित समुदायमाथि भएको हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउनेछन् र त्यसले बहसलाई नयाँ दिशा दिन्छ भन्ने सोचेका थिए । ‘तर, कार्यक्रम हेर्दै जाँदा यो सामान्य टक–शोमा मात्रै सीमित भएकाले खल्लो लागेको छ,’ उदयले भने ।
पहिलो एपिसोड हेर्दा उनलाई थोरै आशा नपलाएको होइन । तर त्यसपछिका श्रृंखलामा त्यो आशामा तुषारापात भएको उनको भनाइ छ । ‘टिचिङ हस्पिटलको प्राङ्गणबाट अजित मिजारको विषयमा सुरु गरिएको कार्यक्रम हेर्दा केही नयाँ हुन्छ, राजेश हमाल नै सडकमा आए भन्ने लाग्याथ्यो । तर नयाँ एपिसोड हेर्दै जाँदा राजेश हमालबाहेक अरू मुद्दा केही देखिन छाड्यो,’ उनले भने ।
देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि दलितहरूको हत्या भइरहेको छ तर कार्यक्रम कता बरालिएको छ थाहा हुन नसकेको उनको गुनासो उनले गरे ।
त्यस्तै चलचित्र निर्माणका क्षेत्रका काम गरिरहेका रघु परियारलाई कार्यक्रम भारतीय अभिनेता आमिर खानले चलाउने ‘सत्यमेव जयते’जस्तो होला भन्ने लागेको थियो । उनले भने, ‘त्यही भएर मैले समता फाउन्डेसनसँग आफ्नो आइडिया पनि सेयर गर्न खोजेको थिएँ । तर बेवास्ता भयो । कार्यक्रम पनि सोचेजस्तो भएन ।’
फाउन्डेसनका अध्यक्ष परियार भने कार्यक्रमले दिएको सकारात्मक सन्देशमै सन्तुष्ट देखिन्छन् । उनले भने, ‘यस्तो कार्यक्रम यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । हरेकलाई आफ्नो परिवारसँगै प्रश्न गर्न बाध्य यो कार्यक्रमले गराउँछ ।’
अहिले दलित समुदायमा पीडितले आफ्नो आवाज नै उठाउन सकेका छैनन्, त्यो वातावरण कार्यक्रमले निर्माण गर्दै जाने उनको बुझाइ छ । तर पनि ‘जातको प्रश्न’माथि सरोकारवाला समुदायको प्रश्न कायमै छ । रघु भन्छन्, ‘कार्यक्रम राम्रो बनाउन सकिएको भए व्यवहारमै केही परिवर्तन देख्न–देखाउन सकिन्थ्यो ।’
यस रिपोर्टको अरु सामाग्री पढ्नुहोस्
‘सबैको सहभागिताको लागि राजेश हमाल’- प्रदीप परियार, अध्यक्ष, समता फाउण्डेशनका
‘जातको प्रश्न’मा म- राजेश हमाल
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २२, २०७७ २३:३९